टोयोटा ग्लाञ्जा कारको गोप्य फिचर्स लिक, बजारमा धूम मच्चाउने दाबी Bizshala -
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्न क-कसले दिए उम्मेद्वारी ? कसको बलियो संभावना ?
एनबिएका नवनिर्वाचित अध्यक्षको कडा कुरा, पहिलो भाषणमै भने–‘न्यायपालिकाका मान्छे बैंकरहरु फटाहा हुन् भन्ने सोच्छन्’
‘सबैभन्दा धेरै बैंक गाभ्नेमा ग्लोबल आइएमई पहिलो, अबको फोकस एसएमई र कर्जा मिश्रणमा’
काठमाण्डौ । मारुती सुजुकी र टोयोटाको ज्वाइन्ट भेञ्चरको रुपमा टोयोटा ग्लाञ्जा कार बनाउने क्रम जारी रहेको छ । यो कारको औपचारिक लञ्चिङअघि नै यसका केही महत्वपूर्ण विशेषताहरु लिक भएका छन् ।
यो कार आगामी जून ६ मा लञ्च हुने कार्यक्रम छ । यो कार मारुती बलेनोमा आधारित रहेर बनाइएको छ । रिपोर्टका अनुसार टोयोटा ग्लाञ्जा दुई भेरिएन्टमा(जी र भी)मा आउनेछ । यसमध्ये भी टप भेरिएन्ट हुनेछ ।
टोयोटा ग्लाञ्जामा १.२ लीटरको पेट्रोल इञ्जिन रहनेछ, जसले ८२ बिएचपीको पावर र ११२ एनएमको टर्क जेनेरेट गर्नेछ । यसबाहेक ग्लाञ्जामा ८९ विएचपी पावरवाला १.२ लिटर के १२ सी ड्यूल–जेट माइल–हाइब्रिड इञ्जिनको विकल्प समेत प्राप्त हुनेछ । ड्यूल जेट हाइल्ड हाइब्रीड इञ्जिन जी भेरिएन्ट्समा मात्र प्राप्त हुनेछ, जुन म्यानुअल गियरबक्सबाट सुसज्जित हुनेछ ।
यो भेरिएन्टमा अटोमेटिक ट्रान्समिसन पनि प्राप्त हुनेछ, तर यो बिना हाइब्रीडवाला १.२ लिटरवाला इञ्जिनमा मात्र हुनेछ । भी भेरिएन्टमा चाहि बिना हाइब्रीडवाला १.२ लिटरको इञ्जिन हुनेछ भने जसमा म्यानुअल र ट्रान्समिसनको अप्सन उपलब्ध हुनेछ ।
लिक भएको फिचर्सः
पुस बटन स्टार्ट
अटो क्लाइमेट कन्ट्रोल
इबीडीको साथमा एबीएस
एप्पल कारप्ले कनेक्टिभिटी
हाइट–अड्जेस्टेबल ड्राइभर सिट
स्टीयरिङ–माउण्टेड अडियो कन्ट्रोल्स
ब्लुटुथको साथमा ७ इञ्चको टचस्क्रीन इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम
नेभिगेसन तथा भ्वाइस कमाण्ड्स
गभर्नर र राजेशकाजी श्रेष्ठबीच सार्वजनिक समारोहमै 'दन्तबझान'
बैंकहरुले ऋणपत्रमा दिइरहेको ब्याज बढी भएको अर्थमन्त्रीको दाबी
साउदीको आरामकोले रच्यो इतिहास, बन्यो विश्वमै आईपीओबाट सर्वाधिक रकम जम्मा गर्ने कम्पनी
अब चिया–कफीसँगै कप पनि खान मिल्ने
नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षमा दाहाल चयन
बेकरी उद्योगकै ब्रान्ड बन्दै ‘लाइभ बेकरी’
मारुती सुजुकीले नयाँ वर्ष २०२० देखि सबै मोडलका कारको मूल्य
काठमाण्डौ । भारतको सबैभन्दा ठूलो गाडी निर्माता कम्पनी मारुती...
रोयल इनफिल्ड मोटरसाइकल इलेक्ट्रिक भर्जनमा ल्याउने तयारी
काठमाण्डौ । रोयल इनफिल्डले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल ल्याउन तयारी सुरु...
अटो सेक्टरमा व्यापक मन्दी, टाटा मोटर्सले १६ सय कर्मचारीलाई
काठमाण्डौ । अटो सकेन्टरमा देखिएको मन्दीका कारण भारमा थोरै कर्मचारी...
टाटा मोटर्स ल्याउँदैछ सातसिटे ‘ग्राभिटस’ कार, यस्ता छन् १०
काठमाण्डौ । टाटा मोटर्सले आफ्नो सातसिटे एसयूभी ‘टाटा ग्राभिटस’...
‘होन्डा सिटी कार’ को ग्लोबल डेब्यू, यस्ता छन् फिचर्स
काठमाण्डौ । नयाँ ‘होन्डा सिटी’ कारले थाइल्यान्डमा सोमबार...
जाडो मौसममा यसरी गर्न सकिन्छ गाडीको मेन्टेनेन्स, पढ्नुस् यी ५
काठमाण्डौ । मंसिर महिना लागेसँगै जाडोको मौसम पनि सुरु भइसकेको छ...
कार चलाउँदा यी ७ कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्, अनावश्यक खर्च र
काठमाण्डौ । नेपालमा अहिले कारप्रतिको आर्कषण बढ्दै गएको छ । यसले...
सरकारीबाट निजी बनेको मारुती सुजुकीमा कायापलट, प्रतिसेयर
काठमाण्डौ । करिब ३७ वर्षअघि सरकारी स्वामित्वमा खुलेको मारुती...